“ခမျြးသာဖို့အတှကျ ပိုကျဆံသုံးပါ” - ONE DAILY MEDIA
ကြှနျတျောတို့က ခမျြးသာဖို့ ပိုကျဆံစုပါပဲ သိခဲ့တာလေ။သူဌေးဆိုတဲ့ လူတနျးစားတှကေို ကွညျ့လိုကျစမျးပါ။သူတို့ဘဝတှဟော ခမျြးသာပွီးရငျး ခမျြးသာနကွေတယျ။ကြှနျတျောတို့ သာမာနျအလုပျသမားဘဝတှကေို ကွညျ့လိုကျစမျး ကြှနျတျောတို့တှဟော ဆငျးရဲပွီးရငျးဆငျးရဲနကွေတယျ။
ကြှနျတျောတို့လို သာမာနျအလုပျသမားတှရေဲ့ ဝငျငှဟော ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အသုံးစရိတျဖွဈသှားတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူဌေးတှရေဲ့ အသုံးစရိတျဟာ သူတို့ရဲ့ ဝငျငှပွေနျဖွဈသှားလို့ပါဘဲ။
အလုပျသမား = ဝငျငှေ to အသုံးစရိတျ
သူဌေး = အသုံးစရိတျ to ဝငျငှေ
ဒါဆို သူဌေးတှေ ဘယျလို ပိုကျဆံသုံးတာလဲ ??
သူဌေးတှဟော Investment Spending လို့ချေါတဲ့ ရငျနှီးမွုပျနှံဖို့အတှကျ ပိုကျဆံ သုံးကွပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ပိုကျဆံတှကေို စီးပှားရေးတိုးတကျဖို့ လုပျငနျးတှခြေဲ့ထှငျဖို့ ပညာသဈတှရေဖို့ အတှကျသုံးကွတယျ။ဒီတော့ သူတို့သုံးသမြှက သူတို့အတှကျ ဝငျငှပွေနျဖွဈလာတယျ။ မြားမြားသုံးလေ မြားမြားဝငျငှရေလပေေါ့။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့ဟာ ခမျြးသာပွီးရငျး ခမျြးသာတော့တာပဲ။
သာမာနျအလုပျသမားတှေ ဘယျလို ပိုကျဆံသုံးကွလဲ ?
ရသမြှကို သုံးဖို့ပဲစဉျးစားကွတယျ။ လစာလေးရပွီဆိုပါစို့။ အဝတျအစားလေးပွေးဝယျ။ ဆိုငျကောငျးလေးပွေးထိုငျ။အရကျလေးသောကျ။ ဖုနျးအသဈလေးကိုငျ။ သာမာနျအလုပျသမားတှဟော
ဝငျငှကေို ဘယျလိုသုံးမလဲပဲ စဉျးစားတယျ။ အသုံးစရိတျကနေ ဘယျလိုဝငျငှရေအောငျ လုပျမလဲ မစဉျးစားကွဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ဆငျးရဲပွီးရငျး ဆငျးရဲလာတာပေါ့။ သူဌေးတှဟော ပိုကျဆံရှာဖို့ သုံးတယျ။
အလုပျသမားတှဟော ပိုကျဆံသုံးဖို့ ရှာတယျ။
သူဌေးတှရေဲ့ အသုံးစရိတျဟာ သူတို့အတှကျ ဝငျငှပွေနျဖွဈတယျ။ (မြားမြားသုံး မြားမြားခမျြးသာ) အလုပျသမားတှရေဲ့ ဝငျငှဟောတော့ သူတို့အတှကျ အသုံးစရိတျပဲဖွဈသှားတယျ။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ပိုကျဆံကို ဆငျးရဲဖို့အတှကျ သုံးမလား ?
ခမျြးသာဖို့အတှကျ သုံးမလား ?
ဆငျးရဲဖို့သုံးမယျဆိုရငျတော့ လိုခငျြတာတှလြှေောကျဝယျပေါ့။ ခမျြးသာဖို့ သုံးမယျဆိုရငျတော့ ရငျးနှီးမွုပျနှံပေါ့။
ကျွန်တော်တို့က ချမ်းသာဖို့ ပိုက်ဆံစုပါပဲ သိခဲ့တာလေ။သူဌေးဆိုတဲ့ လူတန်းစားတွေကို ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။သူတို့ဘဝတွေဟာ ချမ်းသာပြီးရင်း ချမ်းသာနေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ သာမာန်အလုပ်သမားဘဝတွေကို ကြည့်လိုက်စမ်း ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဆင်းရဲပြီးရင်းဆင်းရဲနေကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့လို သာမာန်အလုပ်သမားတွေရဲ့ ဝင်ငွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသုံးစရိတ်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဌေးတွေရဲ့ အသုံးစရိတ်ဟာ သူတို့ရဲ့ ဝင်ငွေပြန်ဖြစ်သွားလို့ပါဘဲ။
“Workers spend what they get, Rich men get what they spend” တဲ့
အလုပ်သမား = ဝင်ငွေ to အသုံးစရိတ်
သူဌေး = အသုံးစရိတ် to ဝင်ငွေ
ဒါဆို သူဌေးတွေ ဘယ်လို ပိုက်ဆံသုံးတာလဲ ??
သူဌေးတွေဟာ Investment Spending လို့ခေါ်တဲ့ ရင်နှီးမြုပ်နှံဖို့အတွက် ပိုက်ဆံ သုံးကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို စီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ လုပ်ငန်းတွေချဲ့ထွင်ဖို့ ပညာသစ်တွေရဖို့ အတွက်သုံးကြတယ်။ဒီတော့ သူတို့သုံးသမျှက သူတို့အတွက် ဝင်ငွေပြန်ဖြစ်လာတယ်။ များများသုံးလေ များများဝင်ငွေရလေပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့ဟာ ချမ်းသာပြီးရင်း ချမ်းသာတော့တာပဲ။
သာမာန်အလုပ်သမားတွေ ဘယ်လို ပိုက်ဆံသုံးကြလဲ ?
ရသမျှကို သုံးဖို့ပဲစဉ်းစားကြတယ်။ လစာလေးရပြီဆိုပါစို့။ အဝတ်အစားလေးပြေးဝယ်။ ဆိုင်ကောင်းလေးပြေးထိုင်။အရက်လေးသောက်။ ဖုန်းအသစ်လေးကိုင်။ သာမာန်အလုပ်သမားတွေဟာ
ဝင်ငွေကို ဘယ်လိုသုံးမလဲပဲ စဉ်းစားတယ်။ အသုံးစရိတ်ကနေ ဘယ်လိုဝင်ငွေရအောင် လုပ်မလဲ မစဉ်းစားကြဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ဆင်းရဲပြီးရင်း ဆင်းရဲလာတာပေါ့။
သူဌေးတွေဟာ ပိုက်ဆံရှာဖို့ သုံးတယ်။
အလုပ်သမားတွေဟာ ပိုက်ဆံသုံးဖို့ ရှာတယ်။
သူဌေးတွေရဲ့ အသုံးစရိတ်ဟာ သူတို့အတွက် ဝင်ငွေပြန်ဖြစ်တယ်။ (များများသုံး များများချမ်းသာ) အလုပ်သမားတွေရဲ့ ဝင်ငွေဟာတော့ သူတို့အတွက် အသုံးစရိတ်ပဲဖြစ်သွားတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုက်ဆံကို ဆင်းရဲဖို့အတွက် သုံးမလား ?
ချမ်းသာဖို့အတွက် သုံးမလား ?
ဆင်းရဲဖို့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ လိုချင်တာတွေလျှောက်ဝယ်ပေါ့။ ချမ်းသာဖို့ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံပေါ့။
“ပိုကျဆံခမျြးသာလာတဲ့အခါ မှားလမှေ့ားထရှိကွတဲ့ အမှားမြား”